Muudama Doktar Abiyyi Ahmad ija miidiyaalee alaatiin
Muudama Doktar Abiyyi Ahmad ija miidiyaalee alaatiin Featured
Finfinnee: Raafama siyaasaa waggoota sadiif Itoophiyaa keessatti qaqqabaa tureen gaaga’amni qabeenyaafi lubbuurratti qaqqabaa ture yeroorraa yerootti dabalaa dhufuusaan haaromsi gadi fagoo akka gaggeeffamuu qabu taasifameera.
Adeemsuma kanaan tasgabbiif nageenya biyyittii lafa turetti deebisuuf tattaaffii taasifamaa tureen gahumsaafi bilchina siyaasaa qabaniin akkasumas filannoo hawaasa bal’aan Doktar Abiyyi Ahmad ministira muummee Itoophiyaa ta’uun Wiixata darberraa eegalee hojiisaanii ifatti eegalaniiru.
Dhimma kana ilaalchisuun miidiyaaleen alaa gabaasa dhiheessaniin ga'umsa siyaasaa Doktar Abiyyi qaban daran calaqqisiisaniiru.
Muudamuu Doktar Abiyyi Ahmad 'BBC'n “Goota dubbii dubbatuun qalbii hawaasa bal’aafi miseensota mana maree hawwatu” jechuun kan gabaase yoo ta’u, haasaa hayyoota siyaasaa waliin taasisaniin haaromsa Itoophiyaaf kan abdiin irra kaa'amu ta'uus ni eera.
Haasaa miseensoota mana mareef dhiyeessanirrattis, badii sirnichi kanaan dura dalageef dhiifamagaafachuunsaanii badiin kun akka irra hindeebi’amneef ciminaan hojjechuuf kutannoo isaan qaban cimaa ta’uu akka mul'isuus 'BBC'n bal'inaan gabaaseera.
Kana malees, raafama siyaasaa qaqqabaa ture keessatti dargaggoonni hedduu aarsaa ta’uusaanii ilaalchisee maatii qabsaa’ota kanaa dhiifama gaafachuun Ministiira Muummee Doktar Abiyyi kan adda isaan taasisu ta’uunis himameefii jira.
Haasaa ministirri muummichaamiseensoota Mana Marii Bakka Bu’oota Ummataaf taasisan kan kanaan duraa caalaa bifa seeneessaan dhiheessuun isaanii qalbii hawaasa addunyaa siyaasa Itoophiyaa hordofu hawwachuusaa kan gabaase ammoo Sagalee Raadiyoo Ameerikaa 'VOA' Sagantaa Afaan Oromooti.
Hayyuu, goota, akkasumas nama uumamumaan kennaa hoggansaa qaban ta’uu haasaa 'VOA'n beektota garagaraa waliin taasiserraa hubachuun danda'ameera.
Waldhabdee Eertiraafi Itoophiyaa gidduu jiru furuuf gaaffiin araaraa karaa ministira muummee haaraatiin gaafatame fedhii isaan nageenya biyyittii qabatamaan mirkaneesuuf taasisaa jiran kan agarsiisu ta’uus VOAn gabaasee jira.
Jeeqama siyaasaa kanaan dura naannoo Oromiyaa keessatti ture Oromoon qe’eef qabeenyasaarraa akka buqqa’u taasifamuu Aljaziraan yoo gabaasu filamuun Doktar Abiyyiifi waadaa isaan yeroo ammaa galaa jiran hudhaalee jiraniif furmaata akka ta’uudha kan dubbatudha.
Kana malees, Doktar Abiyyi Ahmad hoggantoota biyyaa akka Afrikaatti jiran waliin walbira qabamanii wayita ilaalaman dargaggeessaafi barnootaan daran kan of gahaniidha jedha Aljeeziraan. Ga’umsa siyaasaan alattis, gama loltummaanis sadarkaa leetinaalummaarra kan jiran ta’uunsaanii adda akka isaan taasisuus ni eera.
Akka waliigalaatti gabaasawwan 'BBC', 'VOA' akkasumas Aljaziraan balballoomsaniin Ministirri Muummee Doktar Abiyyi Ahmad hojii yeroo ammaa hojjechuuf waadaa galan akka milkoomsaniif sochii hawaasaan cinaatti kabiineesaanii cimuu akka qabus kaasaniiru.
Torban kana/This_Week 11813
Torban darbe/This_Month 91650
Guyyaa mara/All_Days 1603608